Seteembar | 2016 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2016
SAWIRADA: MUSHARAX JABRIIL IBRAAHIM CABDULLE OO SU’AALO UGU JAWAABAY SHACABKA BAYDHABO
Seteembar 30, 2016
WAAJIDPRESS – 30 September 2016:
Kulan is xogwaraysi ah oo ay ka so qeyb galeen qeybaha kala duwan ee Bulshada dhalinyarada aqoonyahanada , isla markaasina Su’aalo ugu Jawaabaayay Musharax Madaxweyne Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo.
kulankan oo ujeedadiisu ahaay is xogwaraysi xaaladaha guud ee dalka ka jira iyo duruufaha adag ee ku xeeran mustaqbalka Soomaaliya sida looga bixi karo, oo Magaalada Baydhabo ka dhacay halkaas oo su,aalo aad u tiro badan ay ku waydiiyeen Musharax Jabriil Ibraahim Cabdulle dadkii ka soo qeyb galay.
Musharax Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ka hor inta aan su,aalaha la waydiin, qudbad dheer halkaas ka jeediyay ayaa ka waramay xaalada uu maanta dalku ku suganyahay isagoo kasoo sheekeeyay marxaladahii kala duwanaa ee dalku soo maray, waxaanu Shacabka u iftiimayay in aanu wadankan u iman inuu ka shaqaysto balse uu doonayo inuu u shaqeeyo .
Gaba gabadii waxa uu musharax Jabriil Ibraahim Cabdulle “mid mid uga jawaabay su’aalo tiro badan oo ay waydiiyeen boqaalal ka soo qeyb galay kualnkaasi .
Kulankaas is xog waraysiga -ahaay ayaa ku soo dhamaaday jawi degan’ ayado oo dadkii ka soo qeyb galay aad ugu riyaaqeen qaabka ugu jawaabay Su;aalaha Musharax Jabriil sido kale fanaaniinta iyo Abwaanada ayaa halkaasi ku soo bandhigay heeso wadaniya.
War deg deg ah:-Ugaaska Beesha Xawaadle Oo Maanta War Culus Kaga Dhawaaqay Magaalada BALEDWEYNE ee gobolka HIIRAAN
Ugaas Xassan Ugaas Khaliif oo ah hogaamiye dhaqameed saameyn weyn ku dhax leh siyaasada Soomaaliya, ayaa faray odayaasha dhaqanka beellaha dega gobolka in ay iska soo xulaan jifo walba 51 xubnood ee soo dooraneysa shaqsiga ku matalaya beesha baarlamaanka federaalka.
Ugaas Xassan oo horay ugu dhawaaqay in magaalada Beledweyne tahay halka lagu soo xulayo xildhibaannada baarlamaanka ku matalaya gobolka Hiiraan, ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan in muddo shan cisho ah jifo walba ku soo gudbiso 51 xubnood ee u soo xulaya xildhibaanka uga mid noqonaya baarlamaanka cusub ee federaalka.
Magaalada Beledweyne waxaa ka soconaya kulamo iyo shirar hoosaadyo ay leeyihiin waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beellaha oo ku howlan siddii ay u soo gudbin lahaayeen magacyada 51 xubnood, taasoo macnaheedu noqonayo in beelaha gobolka diyaar u yahay in xildhibaannadooda ku soo xushaan magaalada Beledweyne.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhawaan sheegay in xubnaha ku matalaya baarlamaanka federaalka gobolllada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu soo xulayo magaalada Beleweyne, hasse ahaatee waxaa arintaa ku gacan-seyray duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan.
War deg deg ah: DAAWO: Sucuudiga oo Hanjabaad u Diray Maraykanka
Banaanbax maanta ka dhacay Muqdisho I’m
WAAJIDPRESS- 30 September 2016:
War deg deg ah: Waxaa hadda la diley Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Cadaallada oo lagu Dilay Magaalada Muqdisho
Seteembar 29, 2016
WAAJIDPRESS – 29 SEPT 2016:
Kooxo hubeysan ayaa lagu soo waramayaa in Caawa Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay ku Dileen Degmada Waabari ee Magaalada Muqdisho.
Sarkalkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Aadan Qoordheere ayaa markii la dilayay waxaa la sheegay in uu ka soo baxay Masjid uu ku soo tukaday Salaada maqrib, islamarkaana ku sii jeeday hooygiisa oo ku yaalla Degmada Waabari.
Sheekh Cismaan Cumar oo ka mid ah ehelada Marxuumka oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa xaqiijiyay geerida Sarkaal Maxamed Aadan Qoordheere.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu intaasi ku daray in dableydii ka dambeysay Dilkaasi ay isaga baxsadeen goobta.
Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Saraakiisha Maamulka Degmada Waabari ee Gobolka Banaadir oo ku aadan Dilkaasi.
Ilaa iyo hada ma jirto cid sheegatay mas’uuliyada Weerarkii Caawa lagu khaarajiyay Maxamed Aadan Qoordheere.
Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii bilihii ugu dambeeyay waxaa siyaabo kala duwan uga dhacayay Dilal qorsheysan oo lagu beegsaday Mas’uuliyiin iyo Saraakiil ka tirsanaa Dowladda, iyo sidoo kale Suxufiyiin ka howlgalla Xarumaha Warbaahineed ee Muqdisho.
War deg deg ah: Dhageyso: Madaxweynihii Hore oo sheegey in dhibaatada Arinta Badda uu ka dambeeyo Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdi-Rashiid
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markii ugu horeysey ka hadley Dacwadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee la xiriirta Muranka Badda ayaa sheegay in Heshiiskaasi ay ka dambeeyeen Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdi-Rashiid xilligaasi Wasiirkii saxiixay, isaguna (Madaxweynihii hore Sheekh Shariif) aanu waxba ka ogeyn is afgaradka dhexmaray Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee arrintaasi ku aadan – Dhageyso:
DAAWO then Akhriso: MUSHARAX JIBRIIL IBRAAHIM CABDULLE OO SI WEYN LOOGU SOO DHOWEEYAY BAYDHABO MAANTA
WAAJIDPRESS – 29 September 2016:
Jibriil Ibraahim Cabdulle (oo ka SOO jeeda Beesha Abgaal – Hawiye) oo ah Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG maamulka Koofur Galbeed.
Safarka Musharax Jibriil ku tagay Baydhabo ayaa qeyb ka ah safaro uu ku kala bixinayo magaalooyinka lagu wado inay dhowaan ka dhacaan doorashada labada aqal ee Baarlamaanka.
Jibriil Ibraahim Cabdulle oo todobaad ka hor Muqdisho kaga dhawaaqay Musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha ayaa ololihiisa si ka duwan Musharaxiinta kale waxaa uu ka bilaabayaa gobolada dalka Soomaaliya.
Musharax Jibriil ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Dadka soo dhoweeyay ayaa watay sawiradiisa, isagoo gacan qaaday dadkii soo dhoweeyay, waxaa ka muuqatay kalsooni iyo dareen farxadeed.
Musharax Jibriil oo Wariyeyaasha kula hadlay garoonka diyaaradaha Baydhabo oo caawa ku hooydey BAYDHABA, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Baydhabo yimaado, isagoo ka mahad celiyay sida weyn ee loo soo dhoweeyay.
War deg deg ah: Madaafiic ku dhacdey Xaafada Buulo Xuubeey Iyo Qarax KA dhacay Degmada Kaaraan ee Magaaada MUQDISHO
laga helaayo Xaafada Buulo Xuubey oo ku dhaw Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho iyo Xarunta UNDP ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah ay ku dhaceen Xaafado ka tirsan Buulo Xuubey.
Madaafiicdaoo tiradooda ay gaarayso saddex Madfac ayaa la sheegay inay ku dhaceen qaarkood meelo banaan ah oo aysan ka dhalan waxyeelo soo gaartay dadka rayidka ah, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan dadka degan Xaafadaha Madaafiicda ay ku dhaceen.
Madaafiicdaan oo aanan la ogeyn rasmi ahaan halka laga soo tuuray, ayaa mar kaliya la maqlay Jugtooda, taasi oo argagax gelisay Bulshada ku nool Xaafada Buulo Xuubey ee Degmada Wadajir.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro Khasaare dhaawac ah oo ka dhashay Madaafiicdaasi, balse ma cadda tirada rasmiga ah ee rayidka ah ee waxyeelada ay ka soo gaartay Madaafiicdaasi.
Ururka Shabaa oo sheegtay masuuliyada Madaafiicdaasi ayaa ku faanay Madaafiicda inay ku dhaceen Xerada Xalane oo ah Taliska ciidamada Midowga Afrika ee Amisom.
Shabaab ayaa sheegtay Madaafiic gaaraya ilaa 8 Madfac inay ku tuureen Xerada Xalane, iyaga oo intaasi hadalkooda raaciyay in Madaafiicda qaarkood ay gudaha u galeen Xalane.
Dhinaca kale waxaa isla maanta, Qarax Khasaare geystay ayaa saaka aroortii wuxuu ka dhacay Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay Khasaare dhimasho ah oo soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay.
Wararka ayaa sheegaya in Qaraxan uu ka dhacay goob maqaayad ah oo ka agdhaw goob Koontarool ah oo ciidamada Dowladda ay ku sugnaayeen, balse xilliga saaka qaraxa uu dhacaayay ayaa Maqaayada waxaa ku sugnaa labo Habeen ah.
Labada Haweenka ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxaasi oo noociisa ahaa miinada dhulka lagu aaso, waxaana uu ka dhacay Suuqa Xirka dheere ee Degmada Kaaraan.
Shabaab oo sheegtay masuuliyada qaraxaasi ayaa waxa ay sheegeen inay halkaasi ku dileen Ciidamo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya oo ku sugnaa goobta Maqaayada.
Shariif Sheekh Axmed oo iska fogeeyay inuu wax ka ogaa Heshiiskii Badda ee Somaliya iyo Kenya
Madaxweynihii hore ee Somaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa wuxuu ka hadlay markii ugu horeysay Heshiiskii is afagaradka ahaa sanadkii 2009 dhexmaray Dowladaha Somaliya iyo Kenya, kaasi oo ku saabsanaa Badda Somaliya.
Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay inuusa waxba ka ogeyn Heshiiskaasi, islamarkaana xumaa iyo samaan wixii ka soo baxa wax laga weydiinaayo Ra’iisul Wasaarihii xilligaas iyo Wasiirkii Saxiixay Heshiiska.
Madaxweynihii hore ee Dowladii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay sababta xilligaan dooda badda loogu soo beegay inay tahay arimo ku aadan dhanka Siyaasada, isaga oo si adag meesha uga saaray inuu wax ka ogaa arimahaasi.
“Marka ugu horeysa heshiiska is fahamka ee la saxiixay, cid akhrisay ma idinku jirtaa, ma waxaa ku jirta Bad la iibiyay iyo Bad la bixiyay, waxaas oo dhan waa la siyaasadeeyay, Baddan marka aan imaanayay soo baxday oo dadka oo dhan la abaabulay maxay tahay, sheekadan siyaasad waaye, Ra’iisul Wasaaraha idin jawaabay, Wasiirka idin jawaabay, anigana maba arkin warqad lagu saxiixay iyo meel lagu saxiixay ma ogeyn, hadey fiican tahay, dadkaas is ka leh, hadey xumaatana ayagaa leh”ayuu yiri Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo la hadlay Tv-ga Somali Cable.
Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay heshiiskaasi inuusan cadeynin in Badda Somaliya la iibsaday, qofkii akhriyayna uu fahmaayo waxa dhacay inuu yahay Is afagarad dhexmaray labada Dowladood.
Dowladda Somaliya ayaa Maxkamada Caalamiga ah ee Hague geysay Dacwadda Badda Somaliya iyo Kenya, iyadoo Somaliya ku guuleysatay in Dacwadaasi ay ka jeediso maxkamada, xilli Kenya ay si adag arintaasi u diidaneyn in Hague ay aqbasho dacwadda.
Maxkamada Hague ayaa dhowr bil, kadib laga sugayaa inay soo saarto go’aanka rasmiga ah ee la xiriira dacwadda Badda Somaliya iyo Kenya u dhaxeysa.
DAAWO: GUDOOMIYAHA BAARLAMAANKA Prof. JAWAARI oo maanta Xafiiskiisa ku qaabiley Wafdi ka socda Hay’adda UNDP
WAAJIDPRESS – 28 September 2016:
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2016.